Abafana babenobuchule nobunono bokuqomisa – Ubukhosi
Home/ Umlando Wethu/Abafana babenobuchule nobunono bokuqomisa
Abafana babenobuchule nobunono bokuqomisa
Ubukhosi News January 14, 2016
Umfana emveni kokukhipha izinkomo usuke esengene ebunsizweni, kanti nentombi emveni komkhosi wayo wokukhula isuke isingene ebutshitshini.
Kunesikhathi sokucela uthando nesikhathi sokuthola ucu
ITHI ikhula nje ibe seyeshelwa uthuli. Manje ngisazochaza ngakho ukweshela lokho. Okokuqala ngqa, lapho umfana esengene ebubhungwini, ukuba azigeze ngobulawu, engakaphumi ukuyoqomisa. Uphuma nje igazi lakhe seliklasile. Phela kwakuthiwa ongaphalaziyo uba nesidina izintombi zimnengwe. Abafana babebufunda khona ekweluseni ubulawu, kanti obunamandla babebunikwa izinyanga. Okunye njalo bekufunda kubanewabo. Kuphalazwa kanjena: kuqalwa ngezihlanzi zokugeza umzimba, emva kwezinsukwana umfana kade ehlanza ngazo usezohlambulula ngamanzi amhlophe, ukuze phela igazi lakhe ligezeke lithandeke. Kuphalazwa ekuseni kakhulu, ukukhala kwezinkukhu, wena owazi amathwasa. Kwakuthiwa ohlanza muva ezinye izinsizwa nezimbangi sezihlanzile umane athathe isidina sazo ngoba zona zisuke sezimeleke ngesithunzi, futhi kwakwaziwa ukuthi ngeke esalunga kuleyo ntombi ayibangayo. Insizwa lena noma ibhungu leli, liqale libushaye ngebhaxa lephahla ubulawu lobu. Nangempela kuzokhephuza elimhlophe igwebu bese, ilihabula insizwa iphumela phandle ibheke ezintabeni zangakwasesheli sayo qede ikhwife isimemeze ngegama.
Eminye imithi kwakuthiwa inamandla kangangoba iyasicoba isesheli liyafika ixila laso sesithambile asisahlanyi kakhulu. Eminye futhi imithi kwakuthiwa inamandla kangangoba intombi ingasuke iphuphe amaphupho amabi kokunye iphathwe ikhanda elingapheli, ide njalo ishaywa uvalo. Ziyixinile-ke izinsizwa. Lokho kwakwenziwa ikakhulukazi kulezo zintombi ezimisile ezabe zizidla ngobuntombi bazo, baze bazifungele abafana. Emva kokukhwifa insizwa isizophalaza, ithi ingaqeda iqonde emfuleni khona kusempondo zankomo iyodla amanzi. Izobuya lapho bese ihloba kahle ngemvunulo yayo yakwanokusho. Insizwa esike yaqonywa yayivunula nangobuhlalu ebenzelwe izintombi zayo kanti engakaqonywa kwakuba ligidigidi uma ihlobe ngobuhlalu esuke ibenzelwe izintombi zabanewabo noma ibabelwe noma ibenzelwe ngunina. Isizothatha izinduku zayo insizwa ibhumbuluze, kepha yayingaliphathi ihawu ngoba phela ayiphume yona impi, kuphela iyokweshela.
Izintombi lezi zabe zifeselwa emfuleni noma emthonjeni lapho zikha khona ekuseni. Ntambama zabe zifeselwa lapho ezitheza khona noma lapho ezigeza khona okwabe kuyimpika namalanga. Insizwa ibinele ifike lapho maqede bese inconda ngomuthi noma izifihle emenweni, ifese. Phela kufuneka ukuba kuthi lapho ziqhamuka izesheli ikhuzele kakhulu izibonge ukuze zethuke. Phela uma ungazifakelanga amanzi esiswini uphenduka imbuqo nesilima sazo, zikuhleke kakhulu kuchwaze amawa. Phela nazo zinesithunzi kangangoba kwakuye kwenzeke ukuba kuthi lapho ziyiqhamukele ingazelele insizwa, ishaywe uvalo olubi ingabe isavuka nasesikhundleni sayo ebifese kuso. Unyube onjalo wayevama ukushima. Kwakuyisiko elenziwayo ukuba inele ikhuzele maqede insizwa bese iwanquma amazwi ayo, ingalindeli mpendulo, kepha intenguze ngobusoka nangobugagu. Intombi yayinganaki noma kukhuluma umuntu yini noma kukhuluma isilwanyana, yayivele idlubulundele iqhubeke nekwenzayo. Lokho kwakudala ukuba zeshelwe kabuhlungu ngokubanjwa nangokuvinjwa nangokusontwa izingalo. Yayaziwa njengesoka lamanyala insizwa eyayivele ikhulume nentombi ime kanti ayiyibambi futhi ayiyivimbi. Leyo nsizwa kwakuye kuthiwe inesikali, iyazeleka izintombi.
Ukuqomisa lokhu kwakungumshikashika ngempela, kokunye kuthi lapho insizwa ibona ukuthi intombi ayiyiniki thuba lokuba iphonse amazwi, okusho ukuthi ayiyeshelisi, insizwa leyo yayingakunkankanyi ukuba iwachithe amanzi lawo ukuze intombi ibambezeleke isiphindela emthonjeni phela iyokukha. Ezinye izintombi ezingamashinga zaziqala zona kuqala zimbhunyele ngamanzi umfokazi lapho zibona ukuthi uzichithela isikhathi ngokuzivimbela. Phela intombi evinjelwa izesheli yephuze ukubuya namanzi yayaziwa njengentombi enesimilo esixegayo, kuthiwe yenziwa ukuthanda abafana. Ngakho-ke nazo izintombi zaziba ngamaqhalaqhala ngisho ezeshelini ezizithandayo, zenzela ukuba zingahlambalazeki emehlweni awontanga namaqhikiza aziphetheyo. Kokunye intombi yayiba namaxila amaningi uma mhlawumbe iyinhle kakhulu noma inogazi noma ikhuthele noma inesikhundla esithile njengokuthi nje izalwa isikhulu.
Kwakwenzeka-ke ukuba izesheli zihlangane emfuleni zizoyibanga. Ezingamagwala zazingabe zisavuka, kanti amasoka namaqhalaqhala ayeyihlanganyela, nayo idle ngokulalela lowo onogazi kuyo. Lo mshikashika wokuqomisa wawuqhubeka amasonto, izinyanga, kanti kokunye kuze kuphele iminyaka ethile. Intombi eyeshelwe isikhathi eside yayenza ukuba isoka layo liziqhenye ngayo kanti esheshe yaqoma kwakuthiwa ilula, ayinasimilo. Okunye okwakwenza ukuba kuphele iminyaka kulo kweshelwe intombi kepha ingaqomi ukuthi izimbangi lezi zazike ziyisukele intombi kanti ayikajutshwa nakujutshwa.
USolwazi uChristian Themba Msimang ungumbhali wencwadi Kusadliwa Ngoludala nezinye eziningi ezikhuluma ngomlando namagugu kaZulu.
Uyadela wena owawulapho!